မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် စကာင်္ပူ ကျောင်းများ-၁ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged future, myanmar youths. Bookmark the permalink.
← မွေးနေ့ မင်္ဂလာမှသည်
မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် စကာင်္ပူကျောင်းများ (၂) →
6 thoughts on “မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် စကာင်္ပူ ကျောင်းများ-၁”
ရွှေအောင် | October 31, 2008 at 6:28 am
အစ်မရေ.. တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြထားတာတွေ့ရတာ ၀မ်းသာ ပါတယ်.. ဆက်ရန်ကိုမျှော်နေတယ်…
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က တချိန်တုန်းက အာရှရဲ့ဘာကြီးညာကြီး လို့ပြော နေရတဲ့ အထည်ကြီးပျက်စကားတွေပြောမနေချင်တော့ပါဘူး.. ကိုယ်တက်ခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုစိတ်နာလို့…
ကုမ်ရာသီသူ | October 31, 2008 at 8:25 am
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုရွှေအောင်ရေ့……… လာမည် မကြာလောက်ဘူးတော့ ထင်ရတာပဲ။ စာရေးနှေးလွန်းလို့ပါ။
လေးမ | November 2, 2008 at 4:20 am
တော်တော်လေးကို မှန်တဲ့ အချက်တွေ ဖတ်ရပါတယ်..။ ဆရာတွေအတွက် အချိန်မရတဲ့ ကိစ္စ … သင်ကြားရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ.. ဟုတ်ပ.. မှန်ပ…။
အရည်အချင်းထက် အရေအတွက်ကို ဦးစားပေးတဲ့ ကိစ္စ…။
ပါရဂူတွေလား.. ပါရဂူတွေကတော့ “ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း” ပါပဲ..။ နည်းနည်းလေး အရည်အချင်းရှိတဲ့သူမွေးလိုက်.. ပြည်ပကို ထိုးကျွေးလိုက်.. အင်း.. ဟုတ်သေးဘူး.. သွားအစားခံလိုက်…။ အင်း ဒီမှာထက်.. ဟိုမှာ အစားခံရတာက ပိုကောင်းတယ်ထင်ရဲ့..။
ကုမ်ရာသီသူ | November 2, 2008 at 6:39 pm
မလေးမရေ…. အစားခံရသူများအကြောင်းကို အပိုင်း (၂) အဖြစ် ရေးထားပါပြီနော်။ ကျွန်မတို့ကတော့ အရိုးကိုက်ခံနေရတဲ့လူတွေပါ။ ကောင်းသလားမမေးနဲ့၊ ကောင်းမှကောင်း- ရင်နာဖို့။
eveningstar | December 13, 2008 at 2:10 am
အင်း မနွယ်က တော်တော်လေး အသေးစိတ်လေ့လာထားတယ်နဲ့တူတယ်။ ကောင်းတာလေးတွေရှိနေသေးပေမယ့် ပညာရဲ့သဘောတွေ ပျောက်ဆုံးနေသလိုပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ သေပြီးရင် မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းသားပြန်လုပ်ရမှာကိုတောင် ကြောက်လာနေပြီ။ သေဖို့တောင်မကောင်းတော့ဘူး။ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်
ကုမ်ရာသီသူ | December 13, 2008 at 6:28 pm
ကိုဖိုးကြယ် (တာရာမင်းေ၀၀တ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်နဲ့ မှားတော့မလို့)- သူငယ်ချင်းရေ့။ တို့များဆီမှာ လူပြန်ဖြစ်ရမှာတော့ မကြောက်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သက်ဝင်ခွင့်ဟာ တို့တိုင်းပြည်မှာ အခွင့်အရေးပိုများပါတယ်။ အချို့အချို့သော နေရာတွေမှာ ပျောက်သောအရာတွေ ရှာတွေ့တတ်ပါတယ်။ ပျောက်တာပဲကွာ။ လုံးဝ ပျက်သုဉ်းသွားပြီလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ အားမလျှော့ပါနဲ့ဦး။